अर्को जंगेको आवश्यक -
प्रदेश ३ प्रमुख लेख
२४ असार २०७७, बुधबार १२:२० Tamakoshi SandeshLeaveaComment on अर्को जंगेको आवश्यक
देशमा कालोबजारी गरेको प्रमाणित भयो भने पाँच जनालाई साक्षी राखी मृत्यु दण्ड दिँदा कुनै खत्बात नलाग्ने उर्दी जारी गर्ने राणा शासकले साँच्चै जनताको माया गरेकै हुन् । अहिले कालोबजारी गर्नेहरुकै हालीमुहाली छ । अहिले हरेक क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएर कालोबजारी गरिरहँदा पनि सरकारले उनीहरुकै पक्षमा कानुन बनाउने गरेको देखिन्छ । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा राखियो । तर, यहि शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गरिँदै छ । यस्तो विषयमा राजनीतिक दलहरु मौन बस्छन् किनभने उनीहरुले निर्वाचनमा त्यहि कालोबजारी गर्ने, त्यहि शिक्षा र स्वस्थ्यमा व्यापार गर्नेहरुसँग चुनावी खर्च लिएका छन् । त्यस्तै, एनसेलले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व तिर्न इन्कार ग¥यो, उमाथि राज्य पनि मौन बस्यो किनभने राज्य सञ्चालकहरुलाई चुनावमा चुनावी खर्च दिने तिनै एनसेल थियो । उसले कर नतिर्नुको भित्री कारण पछि थाहा पाएपछि जनताले राजनीतिक दलहरुको भित्री असलियत थाहा पाएका छन् ।
मुलुकमा जब गणतन्त्रको घोषणा भयो, तब नेताहरु नै अहिले छोटेराजा बन्दै आएका छन् । उनीहरुले आफू नै सर्वैसर्वा ठान्दै आएका छन् । उनीहरुको आफू राजा बन्न होडमा मुलुकको सबै प्रणाली अहिले असफल हुन लागेको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नेताहरुले नै विदेशी शक्तिहरुलाई गुहार्ने देखिएका छन् । अहिले राजनीतिक दलका नेताहरु नै मुलुकलाई अशान्तिको पथमा डो¥याउँदै आएका छन् । कानुनलाई धोती लगाउने काम सरकार सञ्चालकहरु नै बन्दै आएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारमा राखेर यसलाई व्यापार गर्नु सिधासिधी संविधानविरुद्ध हो तर उनीहरुले यहि असंवैधानिक कामलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएका छन् । यत्ति मात्र होइन, बजेटमा समेत सरकारी विद्यालयलाई निजीकरण गर्नेसम्म भनिएको छ । संविधानको खिलाफमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्दा पनि राज्य रमिते मात्र होइन, निजीकरणमा सहयोग गर्ने काम सरकारले गरेपछि सरकार नै कारबाहीमा पर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ शक्ति हातमा भएपछि जे गर्दा पनि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मुलुक विषम परिस्थितिमा हिँडिरहेको छ । कोरोनाले नेपाल मात्र होइन, विश्वलाई नै तहसनहस बनाइरहेको छ । सरकारले उत्पादको कुनै योजना अगाडि नल्याउँदा अहिले युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । तर, कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगार पनि बन्द भएपछि अहिले युवालाई व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई नै धौ धौ पर्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने थियो, सरकारले त्यसो गरेन । सरकारले भाषणमा मात्र उत्पादनमा ध्यान दिने बतायो, तर उसले व्यवहारमा भने यस्तो केही गरेको छैन । अहिले युवाहरुलाई उत्पादनमा लाग्नु आह्वान गर्नुपथ्र्यो । सरकारले अबको तीन वर्षभित्र सबै खेतबारी बाँझो राख्न नपाइने, यदि राखियो भने त्यसलाई सरकारले अधिग्रहण गरेर सुकुमबासीहरुलाई प्रदान गर्ने कानुन ल्याउनु पथ्र्यो । त्यसो गर्ने हो भने कोही कसैले पनि आफ्नो खेतबारी बाँझो राख्ने थिएनन् । कुनै बेला कृषिप्रधान देशका रुपमा चिनिने नेपालले अहिले खाद्यान्न आयात गर्नु शोभयमान हुँदै होइन ।
बरु सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई नै बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । मुलुकले उत्पादन बढाएर आफ्नो उत्पादन विदेशमा आपूर्ति गर्नुपर्ने बेला सरकारले मानवसाधन मात्र निर्यात गर्ने नीति लिएको पाइएको छ । यसो गर्नुको पछाडि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई कुनै न कुनै नाममा ठग्न पाइने हुनाले सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई मात्र प्राथमिकता दिएको हो । सरकारले अहिले आफ्ना जनता खाडीमा अलपत्र छन्, उनीहरुलाई उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले तेब्बर, चौबर भाडा असुलेर नेपाल भित्र्याउँदै आएको छ । उद्धार भन्नेबित्तिकै निःशुल्क हुनुपर्ने हो तर, सरकारले भने उद्धारको नाममा पैसा कमाउँदै आएको छ । केही निजी हवाइ कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले नेपाली जनतालाई भित्र्याउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले नै उद्धार गर्नू भनेको छ । यसको अर्थ निःशुल्क हो तर सरकारले भने निजी हवाइ कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी भाडा असुल गरेको छ । सरकारले जनताको चिन्त गरेको देखिएको छैन, सरकारले त कुनै स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि काम गरिरहेको देखिन्छ ।
सरकारले कस्को पक्षमा काम गर्दै आएको छ ? भन्ने प्रश्न अब राख्नुपर्ने बेला भएको छ । भन्ने बेलामा जनताको नाममा काम गरेको भन्ने सरकारले व्यवहारमा भने जनताकै खिलाफमा काम गरेको देखिन्छ । मुलुकमा कुनै पनि वस्तु उत्पादन नभएको बेला रेमिट्यान्स भित्र्याउने युवाहरुमाथि सरकारले नै शोषण गरिरहेको छ । मुलुकबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडाको फुइँ लगाइरहे पनि मुलुक सञ्चालनका लागि रेमिट्यान्स भित्र्याउनेहरु खाडीमा गएका युवा नै हुन् । तर, आज त्यहि खाडीका युवालाई स्वदेश भित्र्याउँदा उनीहरुलाई ठगी गर्ने काम भएको छ । सरकारले देखादेखी तीन दोब्बर भाडा असुल्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । यत्तिका ठगी अभियान सरकारले नै गर्नुको पछाडि उद्देश्य के ? चीनमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई सित्तैमा भित्र्याउने तर मुलुक सञ्चालनका लागि रेमिट्यान्स भित्र्याउनेहरु भने ठग्ने सरकार कस्का लागि बनेको हो ? चीनमा अध्ययनका लागि जानेहरु पहुँचवालाका छोराछोरी भएकाले सित्तैमा उद्धार गरियो तर खाडी मुलुकका युवाहरुलाई उद्धारका नाममा ठगी गर्ने सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला भएको छ ।
यत्ति मात्र होइन, सरकारले तिनै युवाहरुलाई स्वदेशमा आइसके पनि ठगिरहेको छ । उद्धार भनिए पनि युवाहरु आपैmँले टिकट खरिद गरिरहेका छन् । आफैँ टिकट काट्ने, चार्टर्ड गरेको भाडा पनि बुझाउनुपर्ने हो भने कसरी उद्धार भयो ? यो त व्यापार मात्र भइरहेको छ । सरकारले नै युवाहरुबाट अत्याधिक नाफा हुने गरी गरिएको चार्टर्ड उडान गरेको छ । आफ्ना जनतालाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने नाममा चार्टर्ड उडान भन्दै तेब्बर भाडा असुल गर्ने सरकारले जनतालाई नै ठग्ने काम गरिरहेको छ । यत्ति मात्र होइन कि विदेशबाट ल्याएका नेपालीहरुलाई सवारी भाडामा ठगिएको छ । होल्डिङ सेन्टरबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउँदा अत्यन्तै महँगो उठाइएको छ । सिसिएमसीले होल्डिङ सेन्टरबाट यातायात व्यवस्था विभागमार्फत विभिन्न ठाउँमा पु¥याउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने भने पनि विभागले आफूखुसी भाडा असुलउपर गरिरहेको छ । होल्डिङ सेन्टरबाट बिनाटेन्डर, बिनाकोटेसन र बिनासूचना अनाधिकृत व्यक्तिहरुमार्फत यातायात व्यवस्था विभागबाट तोकिएको छ ।
विभागले तोकेको भाडादरमा तराई क्षेत्रमा ४० प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा ५० प्रतिशत र उच्च पहाडी क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भाडा लिएर सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भनिए पनि सरकारले यसो नगरेर आफूखुसी भाडा असुलउपर गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नै जनतामारा नीति अख्तियार गरिरहेको छ । केही कर्मचारी र सरकारका निश्चित व्यक्तिहरुको फाइदाका लागि जनता ठग्ने अभियान जारी छ । विदेशबाट आफ्ना जनतालाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा तेब्बर भाडा असुल गर्ने र स्वदेशमा आए पनि पनि उनीहरुलाई गुम्राहमा राख्ने सरकार नेपाली जनताको हुनै सक्दैन । स्वार्थ समूहको इशारामा काम गर्ने सरकारबाट जनताले राहत पाउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भएको छ । आफ्नै जनताबाट अनधिकृत रुपमा मनलाग्दी भाडा असुल्ने सरकारले जनताको हितमा काम गर्नै सक्दैन ।
अहिले राजनीतिक दलहरुमा को भाले हुने लडाइँमा देखिएका छन् । एउटा पक्ष सरकारमा जान चाहेको र अर्को पक्ष भनेको आफ्नो कुर्सी जोगाउने चिन्तामा छन् । उनीहरु यसबीच धेरै बार्गेनिङ भइरहेको छ । नेताहरुको स्वार्थमा विदेशी शक्तिहरु पनि अहिले जुर्मुराएका छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि कूटनीतिक क्षेत्र पनि लागिपरेको देखिएको छ । नेताहरुको कुर्सी मोहका कारण कूटनीतिक क्षेत्र चल्मलाउनु नेपालका लागि कुनै पनि हालतमा शुभ हुँदैन । अहिले विदेशी राजदूतहरुले सिधै नेताहरुलाई भेटेर गोप्य छलफल गरिरहेका छन् । विदेशी राजदूतहरुले आफ्नो गरिमा नाघेर अघि बढेका छन् । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका नेताहरुलाई निष्फिक्री भेट्ने हिम्मत गर्नु नेपालको कमजोरी हो । राजदूतहरुले नेताहरुलाई भेट्नका लागि सरकारको स्विकृति लिनुपर्ने हुन्छ, तर अहिले स्विकृती नलिई आफूखुसी नेताहरुलाई भेट्नु हेपाह प्रवृत्तिभन्दा अर्को केही होइन । राजदूतबाट अहिले आफ्नो पक्षमा लबिङ गरेकाले चुपचाप बसेको सरकारले के विचार गर्नुपर्छ भने यदि भोलि सरकारविरुद्ध नै नेताहरुसित यस्तो कोठे बैठक गरे भने यो सैह्य हुन्छ होला ? त्यसैले अब यो मुलुकमा नेताहरुको दादागिरीलाई निमिट्यान्न पार्नका लागि पनि अर्को जंगबहादुर चाहिने बेला भएको छ । देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने साँच्चिकै देशभक्त नेता अबको जरुरी देखिएको छ अन्यथा यिनै नेताहरुले कुन दिन नेपाललाई बेचेर नयाँ दिल्ली वा बेइजिङमा महल बनाएर बस्न बेर छैन ।
नैतिक पतनले राष्ट्रलाई गाँज्दै
२९ आश्विन २०७६, बुधबार ०६:०६ Tamakoshi Sandesh
संविधानमाथि नै प्रहार
५ जेष्ठ २०७८, बुधबार ००:४० Tamakoshi Sandesh